တရုတ်စီးရီးအန်းဒရွိုက်ကားကို DVD, တရုတ်စီးရီးမှာ Android 4.2.2 / 4.4 ကား DVD ကိုထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:တရုတ်စီးရီးအန်းဒရွိုက်ကားကို DVD,တရုတ်စီးရီးမှာ Android 4.2.2 မော်တော်ကား DVD ကို,တရုတ်စီးရီးကို Android 4.4 ကားကို DVD,တရုတ်စီးရီး Touch ကိုမျက်နှာပြင်က Android ကားကို DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > တရုတ်စီးရီးအန်းဒရွိုက်ကားကို DVD
တရုတ်စီးရီးအန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, တရုတ်စီးရီးအန်းဒရွိုက်ကားကို DVD, တရုတ်စီးရီးမှာ Android 4.2.2 မော်တော်ကား DVD ကို ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, တရုတ်စီးရီးကို Android 4.4 ကားကို DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Besturn X40 2017 အတွက် android ကားလမ်းညွှန်စနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
android10 Chery Tiggo42019 အတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Besturn B50 အတွက် Android car gps dvd player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Doblo ဟာ android 7.1.1 ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
EC7 ကားတစ်စီး DVD ကစားသမား 7.1.1 andorid  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Geely EC8 ဟာ android 7.1 အညွှန်းစနစ်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
android 7.1 Geely GX7 ကားတစ်စီးအသံစနစ်များကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 လက်မ Chery E3 ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chery Fulwin2သည်မော်တော်ကား GPS စနစ် Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Geely Emgrand EC7 2012 သည်ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Quad Core ကို Android 5.1 JAC J5 Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 5.1 LIFAN X60 ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Lifan X60 မော်တော်ကားမီဒီယာ Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 5.1 LIFAN X60 DVD ကို Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Lifan 620 ကားကို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 လက်မ MVM 530 ကားကို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chery E3 များအတွက် Android ကိုအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
MVM X33 ချယ်ရီကားကို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
GX7 2014 Geely ကားတစ်စီး DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
JAC ကားကိုစီးရီးများအတွက် S5 ကိုကားတစ်စီး DVD ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Geely ကားများ7လက်မ EX7 ကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Besturn X40 2017 အတွက် android ကားလမ်းညွှန်စနစ်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 257 / Piece/Pieces
besturn X40 2017-2019 အတွက် Android9PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9Pie System၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ Octa Core & 32GB / 64GB ROM၊...
android10 Chery Tiggo42019 အတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 251 / Piece/Pieces
Chery Tiggo42019 အတွက် Android9PX6 ခြောက်လုံးသောကားစတီရီယို ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9PIE စနစ်၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ SIX Core 32GB / 64G ROM၊ Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz), နှင့် Bluetooth Bluetooth6 နှင့်အတူ ၂)...
Besturn B50 အတွက် Android car gps dvd player
Fiat Doblo ဟာ android 7.1.1 ကားတစ်စီးစတီရီယို
Fiat Doblo ဟာ android 7.1.1 ကားတစ်စီးစတီရီယို System and Hardware Parameters OS Android 7.1 CPU Rockchip 3188 Cortex A9, 4-core RAM DDR3
EC7 ကားတစ်စီး DVD ကစားသမား 7.1.1 andorid
EC7 ကားတစ်စီး DVD ကစားသမား 7.1.1 andorid System and Hardware Parameters OS Android 7.1 CPU Rockchip 3188 Cortex A9, 4-core RAM DDR3
Geely EC8 ဟာ android 7.1 အညွှန်းစနစ်များ
Geely EC8 ဟာ android 7.1 အညွှန်းစနစ်များ System and Hardware Parameters OS Android 7.1 CPU Rockchip 3188 Cortex A9, 4-core RAM DDR3
android 7.1 Geely GX7 ကားတစ်စီးအသံစနစ်များကို
android 7.1 Geely GX7 ကားတစ်စီးအသံစနစ်များကို System and Hardware Parameters OS Android 7.1 CPU Rockchip 3188 Cortex A9, 4-core RAM DDR3
7 လက်မ Chery E3 ကားကို DVD Player ကို
7 လက်မ Chery E3 ကားကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့် wince ကားကို DVD Player ကိုအပါအဝင် 1.7 လက်မ Chery E3 ကားကို DVD Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား,...
Chery Fulwin2သည်မော်တော်ကား GPS စနစ် Player ကို
Chery Fulwin2သည်မော်တော်ကား GPS စနစ် Player ကို Chery Fulwin2သည် 1.Car GPS စနစ် Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Geely Emgrand EC7 2012 သည်ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
Geely Emgrand EC7 2012 သည်ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Geely Emgrand EC7 2012 သည် 1.Car မာလ်တီမီဒီယာ Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Quad Core ကို Android 5.1 JAC J5 Navigation
Supply နိုင်ခြင်း: 350000pieces/yea
Quad Core ကို Android 5.1 JAC J5 Navigation 1. Quad Core ကို Android 5.1 JAC J5 Navigation7လက်မကားတစ်စီး GPS စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Quad Core ကို Android 5.1 JAC J5 Navigation GPS စနစ်, ဘလူးတုသ်, WIFI, SD, USB မှတ်, ရေဒီယို, မှန်-link ကို function...
အန်းဒရွိုက် 5.1 LIFAN X60 ကားအသံ
Lifan X60 ကားများအတွက် 1. ကို Android 5.1 LIFAN X60 ကားအသံမထိုက်မတန်။ အန်းဒရွိုက် 5.1 LIFAN X60 ကားအသံအသုံးပြုမှု HD ကို 1024 * 600 မျက်နှာပြင်။ အန်းဒရွိုက် 5.1 LIFAN X60 ကားအသံ WIFI, ရေဒီယို, ဘလူးတုသ် function ကိုအတွက်တည်ဆောက်ခြင်းသိရသည်။ 2....
Lifan X60 မော်တော်ကားမီဒီယာ Navigation
LIFAN X60 ကားကို DVD Player ကို ♦ .OS: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 စနစ်က ♦ .CPU: Rockchip PX3 Cortex A9, Quad Core ♦ .RAM: Samsung DDR3 ကို, 1GB ♦ .Flansh: 16GB WIFI အတွက် .Built ♦ DVR function ကိုအတွက်♦ .Built (တိုက်ရိုက် USB ကကင်မရာကိုချိတ်ဆက်)...
အန်းဒရွိုက် 5.1 LIFAN X60 DVD ကို Player ကို
Lifan 620 ကားကို DVD player
Lifan 620 ကားကို DVD player 1. Lifan 620 ကားကို DVD player, ဒီကားကို DVD ကိုအဓိကအား Lifan 620 ကားတစ်စီးအတွက်အသုံးပြု7လက်မ, ထိခလုတ်, ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ် function ကိုနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်, ထို့နောက်မိတ်ဆွေစက်ဝိုင်းမှမျှဝေဘို့သုံးနိုင်တယ်နှင့် down menu...
7 လက်မ MVM 530 ကားကို DVD player
7 လက်မ MVM 530 ကားကို DVD player စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ 1. : လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင် whell ပယ်သင့်လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ,7လက်မ MVM 530...
Chery E3 များအတွက် Android ကိုအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ
Chery E3 ကားတစ်စီး DVD player စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ 1. : လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင် whell ပယ်သင့်လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ, Chery E3 ကားတစ်စီး DVD player...
MVM X33 ချယ်ရီကားကို DVD player
MVM X33 ချယ်ရီကားကို DVD player စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ 1. : လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင် whell ပယ်သင့်လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ, MVM X33 ချယ်ရီကားကို DVD...
GX7 2014 Geely ကားတစ်စီး DVD player
GX7 2014 Geely ကားတစ်စီး DVD player 1. GX7 2014. များအတွက် Geely ကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ဒီမော်ဒယ်နေသမျှကာလပတ်လုံးကသင့်ကားများအတွက် fited နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ပြုလုပ် installed နိုင်ပါသည်။ GX7 2014 Geely ကားတစ်စီး DVD player ဘို့ဒီကားကို DVD...
JAC ကားကိုစီးရီးများအတွက် S5 ကိုကားတစ်စီး DVD ရေဒီယို
JAC ကားကိုစီးရီးများအတွက် S5 ကိုကားတစ်စီး DVD ရေဒီယို 1. ဒီ Multi-touch screen ကိုဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါရေဒီယို sensitivity ကို setting ကို၏ JAC ကားကိုစီးရီးများအတွက် S5 ကိုကားတစ်စီး DVD ရေဒီယိုအဘို့, HD Screen ကိုကားရေဒီယို Player ကိုမြင့်မားသည်,...
Geely ကားများ7လက်မ EX7 ကားတစ်စီး DVD
Geely ကားများ7လက်မ EX7 ကားတစ်စီး DVD 1. Geely ကားများ7လက်မ EX7 ကားတစ်စီး DVD အဘို့ဒီမော်ဒယ် ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကသင့်ကားများအတွက် fited နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ပြုလုပ် installed နိုင်ပါသည်။ Geely ကားများ7လက်မ EX7 ကားတစ်စီး DVD အဘို့ဒီကားကို DVD နှင့်အတူ...
တရုတ်နိုင်ငံ တရုတ်စီးရီးအန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ပေးသွင်း
Lifan ဘို့ကားတစ်စီး mp3, ကစားသမား VW တို့များအတွက်အထူးကားတစ်စီး DVD ကိုဖြစ်တယ်, အဲဒါကိုမူရင်းကားတစ်စီးအားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကို compatibility နှင့်ကောင်းသောပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်, မူရင်းကားအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Lifan suppoty စတီယာရင်ဘီးကိုထိန်းချုပ် function ကိုအဘို့ကားကိုဂျီပီအက်စ်
ရေဒီယိုလက်ခံရရှိသော: FM ရေ / AM 30 ရက်ဘူတာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ RDS ရရှိနိုင်ပါသည်။
2 ကဗီဒီယိုထဲက 4audio output ကို, 2video input ကို,2အသံဖိုင် input ကို: Lifan ထောက်ခံမှု AV စနစ် output ကို / input ကိုများအတွက်ကားတစ်စီးရေဒီယိုကစားသမား
တရုတ်စီးရီးအန်းဒရွိုက်ကားကို DVD တရုတ်စီးရီးမှာ Android 4.2.2 မော်တော်ကား DVD ကို တရုတ်စီးရီးကို Android 4.4 ကားကို DVD တရုတ်စီးရီး Touch ကိုမျက်နှာပြင်က Android ကားကို DVD တိုယိုတာ Fortune သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD